Published by admin on Wed, 12/16/2015 - 02:20
Russia, one of Assad's staunchest allies, has launched a campaign of air strikes it says are aimed at Islamic State militants but which also support Assad's forces.
Read more about Russia, U.S. clear way for Syria meeting after Kerry Moscow talks
Published by admin on Wed, 12/16/2015 - 02:17
Read more about Clinton warns against Republican 'bluster and bigotry' on terrorism
Economically wrecked Zimbabwe in limbo, waiting for Mugabe to go
Published by admin on Mon, 12/14/2015 - 09:13
Zimbabwe is a country on standby, waiting for the end of an era. Many accuse 91-year-old President Robert Mugabe of having wrecked the economy, but he also commands respect – and Zimbabweans are anxious about what will come after him.
Read more about Economically wrecked Zimbabwe in limbo, waiting for Mugabe to go
President Mugabe says military caught up in succession rift
Published by admin on Fri, 12/11/2015 - 18:32
Senior military sources in the country say the security establishment is deeply loyal to Mugabe, whom they see as the main stabilising figure in the country and the ruling party.
Read more about President Mugabe says military caught up in succession rift
Zanu PF meets amid faction fighting, economic woes
Published by admin on Fri, 12/11/2015 - 14:36
This year the worst drought in a decade has left Zimbabwe, once Africa’s second-biggest maize exporter, with 1.5 million people in need of food aid from January to March, according to the United Nations.
Read more about Zanu PF meets amid faction fighting, economic woes
Published by admin on Fri, 12/11/2015 - 14:31
Read more about Mugabe's party opts for posh Victoria Falls... again